सहिद हेम नारायण गाेल्डकप प्रतियाेगताकाे उद्घाटन खेलमा बिरगंज विजय
५२४ पटक पढिएको
सिरहा फाल्गुन ७ । सिरहा सदरमुकममा सहिद हेम नारायण यादब गाेल्डकप अर्न्तराष्टिय फुलवल प्रतियाेगिताकाे उद्घाटन गरिएकाे छ । प्रतियाेगिताकाे उद्घाटन खेल धारान र बिरगंज एकेडमि बिच भएकाे छ । धारान खेल अवधि सम्ममा कुनै पनि गाेल गर्न सकेन् । बिरगंज एकेडमीले २ गाेल गरि बिजय भएकाे छ। पहिलाे दिनकाे खेलमा बिरंगज एकेडमीकाे खेलाडी किरपा चाैधरीलाई म्यान्वदी म्यच घाेषणा गरिएकाे छ । म्यान्वदी म्याच घाेषणा भएकाे खेलाडीलाई ट्फि र नगद पुरस्कार कार्यक्रमकाे प्रमुख अतिथि सिरहा क्षेत्र नः ३ काे साभाषद लिलानाथ श्रेष्टले प्रदान गर्नु भयाे । स्वास्थ्य र देशकाे पहिचानकाे लागि खेल महत्व पूर्ण रहेकाे छ । खेल प्रति प्रतिवद्व भई खेलाडीहरूले खेल्नु पर्छ । सरकारले खेलकुदलाई बढी प्राथमिकतामा राखि लागनी गरि खेलाडीका विकास गर्दैछन् । सिरहामा पनि खेल कुद विकासका लागि विशेष लागानी गर्न जरूरी रहेकाे छ । खेल कुद विकासका लागि सिरहा नगरपालिकाले रंगशाला निर्माणकाे लागि ३० लाख दिए म केन्द्रबाट ७० लाख ल्याउने छु । विकासका लागि अाएकाे बजेट पनि कार्यन्वयन भईरहेकाे छैन । अहिलेकाे अावस्थामा विकास निर्माण कार्य माेलताेलकाे सहकार्यमा अगाडि बढाउनु पर्छ क्षेत्रिय साभाषदले बताउनु भयाे । कार्यक्रममा प्रदेश साभाषद प्रमाेद यादब , जिल्लकाे एस. पि. जीवन श्रेष्ठ र युवा नेता डा. नविय कुमार यादब पनि मञ्चमा अाशिन भएकाे थियाे । फाल्गुन ८ गतेकाे खेल सिरहा सल्हेश क्लव र बिरगंज बिच हुने छ ।